Global Voices teny Malagasy » Fanentanana Azia Atsimo Atsinanana Afaka Amin’ny Setro-Tsigara · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Septambra 2013 16:57 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Kambodza, Thailandy, Vietnam, Fahasalamàna, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Tanora, Toekarena sy Fandraharahàna
Maro ireo fandraisana an-tanana any Azia Atsimo Atsinanana no manao izay tsy ifohan'ny tanora sigara. Ao anatin'ny vondrona mitarika izany fanentanana izany ny Firaisankina Fanaraha-maso ny Paraky ao Azia Atsimo Atsinanana (SEATCA ) izay manana tanjona ‘hametraka sy hampivelatra politika mahomby hifehezana [ho fanaraha-maso] ny paraky ao amin'ny renim-paritra. Andeha hanaovantsika tamberina ny asa sasantsasany ataon'ny SEATCA ka soratany ao amin'ny tranonkalany.
Tamin'ny fiandohan'ity volana ity, tokotokony ho 140 ny tanora sy ny mpianatra avy ao Thailandy nanatontosa fihetsiketseha-panoherana  teo anoloan'ny Biraon'ny Philip Morris International tao Bangkok ary mitaky  ny fanesorana ny fitoriana napetrak'io orinasa io ny governemanta Thailandey izay namoaka didy mitaky hanokanana ny 85 isanjaton'ny fonontsigara ho amin'ny sary fampitandremana. Sariohatry ny olona 140 matin'ny sigara (paraky) isan'andro ao Thailandy ny isan'ireo mpanao fihetsiketsehana 140 ireo.
Maro ihany koa ny vondrona namoaka taratasy misokatra  ho an'i Philip Morris momba ity lohahevitra ity:
Angamba mila manontany tena ianao raha mendrika ny ezaka ataonao hialana min'ny lalàna (Thailandey) anatiny amin'ny fitoriana ny Minisiteran'ny Fahasalamam-Bahoaka, mba hampitomboanao ny hadirin'ny vola matinao amin'ny alalan'ny fisintonana ny ankizy sy ny tanora ho mpanjifanao ho solon'ireo efa maty na marary.
Mpianatra Thailandey manaitra amin'ny loza mitatao ateraky ny fifohana sigara. Sary avy amin'ny Facebook-n'ny ASH Thailand
Hetsika fanoherana ny fifohana sigara ao Bangkok
Sary avy amin'ny Facebook-n'ny ASH Thailand
Mandritra izany fotoana izany ao Vietnam, voatatitra tapa-bolana lasa izay fa efa eo am-pametrahana ny lalàna mitaky ny hametrahana fampitandremana loza ara-pahasalamana  amin'ny fonon-tsigara ry zareo.
Fampitandremana loza ara-pahasalamana ao Vietnam. Sarin'i Vinacosh/Ms.Doan Thu Huyen
Mampisongadina an'Atoa Trinh Thang Binh ity lahatsarin-kira manaraka ity, Mpihira Vietnamiana namoron-kira  manohitra ny fifohana sigara izy
Any Kambodza, niaraka ekipa  amin'ireo manampahefana ao an-tanàna hanao fanentanana “hanaitra ny mpaninjara sigara ny maha-fandikan-dalàna ho fanaovana dokambarotra ny sigara sy fampiroboroboana izany amin'ny endrika afisy mipetraka eny amin'ny toera-pivarotana.” ny mpikambana ao amin'ny Vokovoko Mena Kambojiana.
…tanora mitondra takelaka lehibe (sora-baventy) misy ny hafatra “ny fanaovana dokambarotra sigara amin'ny endriny rehetra dia manitsakitsaka ny didy hitsivolana navoakan'ny fanjakana” sy “Misaotra anao tsy manao dokambarotra sigara”. Miaraka mandeha amin'ny manampahefana ny tanora manolotena mitety mpivarotra sy fisakafoanana mijery raha misy dokambarotra sigara any. Rehefa mahita dokambarotra sigara ireo tanora dia mijoro eo anoloan'ilay fivarotana na fisakafoanana manangana ireo sora-baventy.
Tany Philippines, olona 14000 no nandray anjara amin'ny fiezahana hanao [mitaben'ny] endrika  fangon’ (logo) ny fandrarana fifohana sigara lehibe indrindra maneratany tao amin'ny bozaky ny Oniversite Bicol ao an-tananan'i Legazpi, Albay.
Olombelona manao fangon'ny fandrarana tsy hifoka sigara tao Albay, Philippines. Sary @PhilippineStar
Afa-mihambo  tamin'ny fahatontosan'ity hetsika ity i Jessa Acuna:
Tsy hoe fikasana hanamontsana ny zava-bita tsara indrindra manerantany izy tiy fa dingana lehibe ho fanairana ny Filipinos sy ny rehetra manerana izao tontolo izao fa ny fifohana sigara no mora sorohina indrindra tsy hahazoana aretina.
Ny itodihana sy ny handrenesana ny tatitra eo anivon'ny firenena no antenainy manampahefana hahatratra ny Filipino tsirairay. Mirehareha ho Albayno aho ary izao ny fomba keliko hanohanana ity fanentanana ity. Aoka tsy ho hetsika fotsiny ihany izy ity fa ho fampahatsiarovana.
Noho ny fahatsapany ny fitomboan-dazan'ny e-sigara [e-cigarettes] ao amin'ny firenena dia namoaka tolo-kevitry  ny lozan'ny fampiroboroboana ity karazam-bokatra ity ny Sampan-draharaha[m-panjakana] misahana ny Sakafo sy ny Fanafody ao amin'ny firenena:
Na fanahy iniana na tsia dia mampiroborobo ny fifohana sigara eo amin'ny ankizy sy ny tanora ny sigara elektrônika . Mahatonga azy ireo ho sahisahy kokoa sy hisedra amin'izay mety ho loza ateraky ny fifohana sigara izy io. Mifanohitra amin'ny tanjon'ny Departemantan'ny Fahasalamana amin'ny fampitsaharana ny fifohana sigara sy ny [fihinanana] paraky izy io.
Toroa-kevitra TSY hifoka ny vahoaka sy TSY hampiasa sigara, sigarabe, na e-sigara.
Nampitandrina  ny mety ho fiantraikany ratsy amin'ny fampiasana e-sigara ny Fikambanan'ny Mpitsabo ao Phillipine:
Tsy ‘fomba fiainana hafa mahasolo’ araka ny hogahogain'ny mpanolotra sy ny mpampiroborobo azy ny fampiasana e-sigara fa ‘fitondratena ratsy’ vaovao izay tsy tokony ampianarina ny vahoaka amin'ny ankapobeny ary amin'ny zanatsika indindra indrindra.
Mora roboka sy voafitaka amin'ny fifohana ireo fitaovana vaovao ireny ny tanorantsika. Na dia fantatra aza ny fifohan'ny filohatsika sigara dia mety mbola manana andraikitra lehibe amin'ny tolona ataontsika iadiana amin'ny faharatsian'ny fifohana sigara eto amin'ny firenena ity izy/.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/09/02/51127/
 taratasy misokatra: http://blogs.bmj.com/tc/2013/08/01/thai-youth-ask-the-tobacco-industry-to-withdraw-lawsuit-against-new-pictorial-health-warnings/
 fampitandremana loza ara-pahasalamana: http://seatca.org/?p=2916
 niaraka ekipa: http://seatca.org/?p=2682